Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 2t l1013 zom
Zoma 07 Jona
“Nanjombona dia nanjombona ny andro, kanefa tsy nahavery fanantenana an’ireo natoky an’Andriamanitra izany. Natsangana i Hagay sy Zakaria mpaminany mba hiatrika ny zava-tsarotra. Nampiseho ny anton’ny nahatonga ny zava-manahirana nihatra tamin’ny Isiraelita ireo filazana nampihetsi-po nataony. Matoa mantsy tsy nandeha araka ny faniriany ny zava-drehetra, dia noho ny fanadinoany hamela ny tombontsoan’ny fanjakan’Andriamanitra hatao alohan’ny zavatra hafa rehetra. Raha mba nanome voninahitra an’Andriamanitra mantsy izy ireo, raha mba naneho fanajana sy fitsaohana Azy izy, ka ny fanorenana ny tranony aloha no nokarakaraina, dia ho nahazo antoka ny fanatrehany sy ny fitahiany izy.” – MM, t. 466.
“Tsy ny rahona mampiseho ny voninahitr’i Jehovah no naheni-kaja ny tempoly faharoa, fa ny fanatrehana velon’Ilay nitoeran’ny fahafenoan’Andriamanitra hita vatana dia Andriamanitra mihitsy naseho tao amin’ny nofo. Ilay ‘Irin’ny firenena rehetra’ dia efa tonga tokoa tao amin’ny tempoly fony nampianatra sy nanasitrana tao amin’ny kianja masina Ilay lehilahy avy any Nazareta. Ny fanatrehan’i Kristy, ary io ihany, no nampihoatra ny voninahitry ny tempoly faharoa tamin’ilay voalohany.” – HM, t. 24.
-Ifanakalozy hevitra ao amin’ny kilasy ny valin-teninao mikasika ny fanontaniana ao amin’ny lesona tamin’ny Alatsinainy, momba ny fisian’i Jesôsy teto an-tany. Saintsaino ny akon’ny fanatrehany, ary tsy izay ihany fa ny nanaovany sorona ny ainy noho ny otan’izao tontolo izao. Saintsaino ny zavatra asehon’ireo zavatra ireo mikasika ny tombam-bidintsika tsirairay avy. Saintsaino ihany koa ny maha-samy hafa tanteraka io fomba fijery ny taranak’olombelona io amin’ny an’ireo mpandala ny foto-kevitry ny fivoarana miandalana, tsy mino an’Andriamanitra, izay fahita mahazatra any amin’ny faritra sasany eto amin’izao tontolo izao.
-Miresaka ny amin’ny mpanjakan’i Babilônina anankiray, izay feno avonavona teo amin’ny fara-tampon’ny fahefany, i Isaià. Io mpanjaka io dia “nampihorohoro ny tany sy nampihozongozona ny fanjakana” (Isa. 14:16,17). Ahoana no tsy itovizan’izany amin’ilay fampihorohoroana vokatry ny fidiran’Andriamanitra an-tsehatra, araka ny filazan’i Hagay izany ao amin’ny toko faharoa amin’ny bokiny?
-Matetika ny Isiraelita fahiny no tsy nankatò ny hafatra notorin’ireo mpaminanin’Andriamanitra. Miomàna hizara amin’ ireo mpianatra ao amin’ny kilasinao ireo fomba sasantsasany izay anoheran’ny vahoakan’Andriamanitra amin’izao fotoana izao koa ny hafatra izay alefan’i Jehôvah ho an’ny vahoakany.
-Mazava be ny voalazan’ny Baiboly: Tsy nanan-kery intsony ny tempoly fahiny sy ny rafitra momba ny fanaterana fanatitra najoro teo anivony, raha vao maty i Kristy. Inona no ambaran’ny Hebreo 8 sy 9 mikasika ireo zavatra efa nataon’i Kristy sy mbola ataony ho antsika kanefa tsy tanteraky ny fitoerana masina tety an-tany na oviana na oviana?